AGAASIMAHA MACDANTA & BIYAHA OO KA WARAMAY HAWLAHA SAHAMINTA AH EE AY SHIRKADA TGS KA WADO DALKA IYO BOOQASHO WASIIRKA MACDANTU KU TAGI DOONO MAREYKANKA | WWW.SOMALILAND.NO
Hargeysa, March 26, 2008 (sl.no) – “Wasiirka waxa casuuntay shirkada TGS-Nopec si uu uga qayb galo shirka caalamiga ah ee shirkadaha saliidu iskugu imanayaan magaalada Houston” Sidaa waxa yidhi, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha Somaliland, Axmed Ibraahim Suldaan oo shalay xafiiskiisa ugu waramayay Haatuf.
Agaasimaha oo waraysi khaas ah siiyay Wargeyska Haatuf, wuxuu isaga oo dhamaystiran u dhacay sidan:
S:Agaasime marka hore warbixin naga sii, barnaamijka sahaminta ee ay shirkadda TGS ka wado galbeedka dalka?
J: Shirkadda TGS waxay hawshan soo waday muddo badan, imikana waxa ay maraysaa halkii ugu dambaysay, waxaana loogu talo galay in marka hore ay dalka oo dhan ka samayso macluumaad la xidhiidha khayraadka ku duugan dhulka Somaliland oo dhan, waxaana la dhameeyay Air Magnetic Survey-gii, imikana waxa ay dhinaca galbeed ee dalka ka wadaa Seismic Magnetic offshore-ka, taasina imika waxay ku jirtaa gebagabo, waxaana hadhay wax aan bil ka badnayn. Waxaana 03/2/2008 laga bilaabay xeebta galbeed, in lagu sahamiyo biyaha xeebta (ffshore) ee Somaliland.
S: Shirkadda TGS sidee ayay u soo ceshanaysaa dakhliga ka gelaya hawsha sahaminta ee ay samanayso?
J: Waxa ay u soo ceshanaysaa habka wadaaga faa’iidada, taasi oo ah saami ku yeelashada wax-soo-saarka ( production sharing), taasi oo ah marka wax la soo saaro in halkaasi ay uga soo noqoto kharashkii ka galay.
S: Waxa la sheegay in shirkadda Total xarunteeda Paris saraakiil ka socotaa ay dalka yimaadeen, ka dibna aad ku xidheen inay la xaasho shirkadda TGS, miyaanay taasi ahayn inaad hawshii Wasaaraddaba u xilsaarteen shirkadaasi?
J: Horta aan ku saxo’e sannad horteed ayay ahayd markii ay noo yimaadeen saraakiisha ka socota shirkadda TOTAL, waxaanay naga codsadeen in aanu block ay saliid ka baadhaan siino, waxaananu u sheegnay in aanu heshiis kula jirno shirkadda TGS NOPEC, marka macluumaadka sahaminta la dhameeyana ay wada hadalada block ay doonayaan sugaan, ka dibna markaasi aanu ka xaalno block-ga la siinayo.
S: Haddii aad shirkadda TGS NOPEC, heshiiskeeda u tixgeliseen Block-gii ay doonaysay shirkadda TOTAL, markaa ma la odhan karaa, shirkadda TGS dano weyn ayaa inoogu xidhan oo malaha dawladeeda Norway ayaad aqoonsi inooga haysaan?
J: Horta ma jirto cid aanu xidhnay, shirkadda TGS-na waxa weeyaan marka ay sahaminta dhamayso cidii doonaysa inay saliid ka baadho dalkeena waxa loo dhigi doonaa Bid ama Qandaraas, markaa cidii ku guulaysata ayuun baa heli doonta, umanaanu xidhin shirkadda TGS, laakiin markii aanu soo bandhignay waxay noqotay shirkadda keli ah ee naga ogolaatay, xataa shirkadaha waaweyn ee aad sheegayso waanu la xidhiidhnay oo qaar badan oo na diiday ayaa jira oo ay kuwa Maraykanku ka mid yihiin.
S: Waxa la sheegay in Wasiirku dhawaan u safri doono magaalada Houston ee dalka Maraykanka, isla markaana uu hadda ka soo noqday safar uu ku tegay Itoobiya oo uu fiise ugu doontay, iyada oo ay fiisaha u soo qaadayso shirkadda TGS, markaa bal arrintaana nooga waran?
J: Way jirtaa oo aniga iyo Wasiirkuba waxa aanu booqasho ku tegi doonaa shirweyne lagu qabanayo magaalada Houston ee dalka Maraykanka bisha April ee soo socota, sideedabana marka qofku doonayo inuu dal tago, si fiisaha loogu soo saaro waa inay cidi casuuntaa, markaa yaa casuumay ayaa meesha taala, tusaale ahaan anigu Baasaaboor ajnebi ah ayaan sitaa oo uma baahni, laakiin Wasiirku wuu u baahan yahay.
S: Wasiirka Ma TGS ayaa hogaaminaysa oo ku casuuntay inuu shirkaasi ka qayb galo?
J: Haa oo TGS ayaa ku casuuntay, laakiin iyadu ma hogaaminayso, ee waxa ay u dalbaysaa uun fiisaha oo lagu xidhayo marka Maraykanka la tegayo in ujeedadii aad u tegaysay iyo meeshii aad tagaysay iyo cidii ku casuuntayba lagaa helo, sida nidaamku yahay, sidaasi ayay ku casuuntay wasiirka shirkadda TGS, laakiin iyadu ma hogaaminayso.
S: Haddii shirkadda TGS casuuntay Wasiirka, miyaanay markaa noqonaynin in wasiirku ka mid yahay weftiga TGS ee ka qayb galaya, isla markaana halkii Wasiirku ka hogaamin lahaa iyadu hogaaminayso, taasina ay ka xidhi karto in shirkaasi oo uu Wasiirku fursad u heli lahaa inuu la kulmo shirkado waaweyn oo dunida saliida soo saara, sida Cheveron, Exxon iwm in ay u mari waayaan TGS?
J: Waxaad ogtahay duruufaha jira ee xagga Fiisaha ku xidhan, inuu Wasiirku u baahan yahay cid casuunta, waxaanu ka qayb galayaa Wasiirku shir ay halkaasi ku leeyihiin AAPG (American Association of Petroleum Group), shirkadda TGS-na waxay uun u soo dirtay casuumada, iskumana xidhna casuumadda iyo hogaamintu.
S: waxa aad ka warantaa shirkadda Range Resource, African Oil iyo Lundin xidhiidhka ay Wasaaraddu la leedahay iyo xidhiidhka ay la leeyihiin Puntland?
J: Ma jiro wax ay wasaaraddu xidhiidh la leedahay Range Resource, waxaanu annagu maamulaa Somaliland, markaa annagu waxa Puntland nooma yaalo, namana khuseeyo.
S: Waxa ay Range Resource, saamilaydeeda u sheegtay in magaalada Hadaaftimo ee Somaliland oo ka mid ah meelaha ay kula heshiisay maamulka Puntland inay shidaal ka baadho ay dhawaan ciidamada Somaliland ka baxeen, ka dib markii ay maleeshiyo Beeleed deegaanka ahi ku kaceen, markaa waqti dhawna laga bilaabi doono ka waran?
J: Ciddii doontaa waxa ay doonayso ha tidhaahdo, laakiin Hadaaftimo waa dhulka Somaliland mana jirto cid ciidan ka soo saartay, dhulkana Somaliland-na macdantiisa iyo khayraadka ku duugan annaga ayaa u qaabilsan, laakiin cidii been isku sheegaysaa iyaga ayay jirtaa. Waxa aanu annagu wada hadalo la galnay shirkad African Oil iyo Range toona ma jirto.
Waraysi uu Agaasimuhu bishii February, horaanteedii siiyay Haatuf waxa uu ku sheegay inay la soo xidhiidhay shirkadda Lundin, isla markaana ay ku xidheen inay soo cadeeyaan in aanu jirin xidhiidh ka dhaxeeya shirkadda Range Resource, isla markaana ay shirkadaasi u soo sheegtay in aanu jirin xidhiidh ka dhaxeeyaa, hase yeeshee sida ay sheegeen dadka la socda arrimahan, shirkadaha Lundin, Range Resource iyo African Oil, waxa weeye shirkado isku wada xidhan oo ay leeyihiin ganacsato reer Australia ah oo ku dhaw 200 boqol, isla markaana la inta la ogyahay aan weligood kob caleen leh ka soo dur-durin.
« SHEEKADII TAXANAHA AHAYD EE CUDUR-DAAR JACEYL 117 QOF REER SL-AH OO KU XIDHAN XABSIYADA DALKA LIIBIYA IYO BUDHCAD BADEED LAGU QABTAY WAJAALE “Wargeyska Geeska Afrika” »